ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेभन्दा माधव नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बलियो छ : सोम पाण्डे (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
काठमाडौं, १३ मंसिर । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रभावशाली नेता सोमप्रसाद पाण्डेले केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेको भएपनि त्यो एकता बचाउन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले ओलीलाई असफल नेताको संज्ञासमेत दिए ।
हिजो राति प्राइम टिभीबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले माधव नेपालले १५ वर्षको अवधिमा नेतृत्वमा हुँदा जबजलाई जनतामा आकर्षण बढाएको दाबी गरे ।
उनले आफ्नो पार्टी एमालेभन्दा बलियो अवस्थामा रहेको सुनाए । उनले माधव नेपाल सबै प्रदेशमा एमालेभन्दा बलियो रहेको सुनाए । उनले ओलीले पार्टी पद्धती र सिद्धान्तलाई छाडेको आरोप लगाए । उनले एमाले त अहिले ९९ प्रतिशत ओली कम्पनीमा रुपान्तरित भएको पनि टिप्पणी गरे ।
निर्वाचनको विषयमा रमेश बडाल र खिमलाल देवकोटाबीच चर्काचर्की (भिडिओसहित)
काठमाडौं, १० माघ । निर्वाचनको विषयमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् नेकपा (एमाले) का नेता रमेश बडाल
तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न असम्भव छ, यो व्यवहारिक छैन् : प्रदीप ज्ञवाली (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ९ माघ । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्कालै गर्नुपर्नेमा
राजेशपायल राई भन्छन् : म विदेशमा गएपछि लोकगीत गाउन मन पराउँछु (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ९ माघ । चर्चित गायक राजेशपायल राईले संसारभरि छरिएर नेपालीहरुले आफूलाई मन पराउने बताएका
सरकारको ६ महिना कति सफल ? : ऋषि धमलाको कार्यक्रममा कसले के भने ? (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ८ माघ । सरकारको ६ महिनाको बारेमा दलका नेताहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
सरकारको विषयमा एमाले र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का युवा नेताहरुको चर्काचर्की (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ८ माघ । नेकपा (एमाले) का युवा नेता बच्चन सिंहले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान
विश्लेषक अरुण सुवेदीको दाबी : माधव नेपाल अहिले धरापमा हुनुहुन्छ, प्रत्यक्षतर्फ एक सिट पनि जित्न संघर्ष छ (भिडिओसहित)
काठमाडौं, ७ माघ । राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीले अहिले चुनावको कारण सबैभन्दा संकटको अवस्था माधव
काठमाडौं, ६ माघ । नेकपा (एमाले) का नेता खगराज अधिकारीले अब प्रतिपक्षी दल आक्रामक रुपमा